Google Translate | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်
Google က APK ကို Translate
•စာရိုက်ခြင်းဖြင့် 103 ဘာသာစကားများအကြား Translate
• Translate ဖို့ကိုအသာပုတ်: Copy ကူးမဆို app ထဲမှာစာသားနဲ့သင့်ရဲ့ဘာသာပြန်ပေါ်လာ
•အော့ဖ်လိုင်းဖြင့်: သင်အဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်ရှိသည့်အခါ 59 ဘာသာစကားများ Translate
•လက်ငင်းကင်မရာကိုဘာသာပြန်ချက်: 38 ဘာသာစကားများချက်ချင်းစာသားကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်သင့်ကင်မရာကိုသုံးပါ
•ကင်မရာ Mode ကို: 37 ဘာသာစကားများ high-quality ဘာသာများအတွက်စာသားရုပ်ပုံများကိုယူ
•, Conversation Mode ကို: 32 ဘာသာစကားများ Two-လမ်းလက်ငင်းမိန့်ခွန်းဘာသာပြန်ချက်
•လက်ရေး: Draw ဇာတ်ကောင်အစား 93 ဘာသာစကားများအတွက်ကီးဘုတ်သုံးပြီး
အာဖရိက, Albanian အဘိဓါန်, ခြ, အာရဗီ, အဘိဓါန် Armenian-, Azerbaijani-, အဘိဓါန် Basque-, ဘီလာရု, ဘင်္ဂါလီ, ဘော့စျနီးယား, ဘူဂေးရီးယား, ကာတာလ, Cebuano-, Chichewa, တရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ), တရုတ် (ရိုးရာ), Corsican- ခရိုအရှေ, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, အက်စပရန်, Estonian အဘိဓါန်, ဖိလစျ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဖရီစီရ, ဂါလာစီယံ, ဂျြောဂြီယ, ဂျာမန်, ဂရိ, ဂူဂြာရ, ဟာအီတီ Creole, ဥစာ, ဟာဝယေံ, ဟီဘရူး, ဟိန္ဒူ, အဘိဓါန် Hmong, ဟနျဂရေီ, လန်, အစ်ဂဘို, အငျဒိုနီးရှား, အိုငျးရ, အီတလီ, ဂျပန်, ဂျာဗား , ကန်နာဒါ, Kazakh-, ခမာ, ကိုးရီးယား, ဒျ (Kurmanji), ခရူဂ, လာအို, လကျတငျ, အံ, အာနီယံ, Luxembourgish အဘိဓါန်, စီဒိုနီယံ, အာလာဂါစီ, မလေး, မလေးရာလ, မောလ်, ရီ, မာရသီ, လီး, မြန်မာ (ဗမာ), နီပေါ, ဘှ , ပါရျှတို, ပါရှနျပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ပနျခြာပီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, Samoan အဘိဓါန်, စကော့ Gaelic, ဆားဗီး, ဆက်ဆိုသို, Shona အဘိဓါန်, စငျဒီ, ဆငျဟာလ, စလိုဗ, စလိုဗေးနီး, ဆိုမာလီ, စပိနျ, ဆူဒနျ, ဆွာဟီလီ, ဆှီဒငျ, Tajik-, တမီး Telugu, ထိုင်း, တူရကီ, ယူကရိန်း, ဒူ, အဘိဓါန် Uzbek-, ဗီယက်နမ်, ဝလေ, ဇိုစာ, Yiddish-, ရိုရု, ဇူလူ
Google Translate တွင်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်ပါသည်:
အော့ဖ်လိုင်းဘာသာပြန်ချက် data တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့•ပြင်ပသိုလှောင်မှု
• Accounts ကိုနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ-In နှင့်စက်ကိရိယာများကိုဖြတ်ပြီးထပ်တူပြုခြင်းများအတွက်အထောက်အထားများ
16.70 ကို MB
နိုဝင်ဘာလ 13, 2019 မှာ 1: 57 ညနေ
Ravi Siddharth (Rockstar) says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2017 မှာ 11: 10 ညနေ
ငါမှာ google ဘာသာပြန်ဆို ... ကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဘာသာစကားများကိုသင်ယူလိုသူများအတွက် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသင်ဒါအများကြီး Appsapk.com သည် မှလွဲ. မည်သည့်အကောင်းဆုံး app ကိုရှိလိမ့်မည်မထင်ကြဘူး။
အောက်တိုဘာလ 23, 2017 မှာ 3: 44 ညနေ
ဇူလိုင်လ 24, 2017 မှာ 11: 20 နံနက်
nice app ကိုအစဉ်အဆက်
ဇူလိုင်လ 4, 2017 မှာ 6: 57 နံနက်
မေလ 30, 2017 မှာ 9: 42 ညနေ
ဒီ app ကိုအလွန်အသုံးဝင်ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများကြီး
ဧပြီလ 27, 2017 မှာ 10: 19 နံနက်
ဒီ app ကအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်ရှိသည်။
မတ်လ 29, 2017 မှာ 2: 34 ညနေ
ကိုယ့်မှာ google ဘာသာပြန်ဆိုသူ apk ကို install cant ။
evry အချိန်တစ် messege "ဒီ apk နဲ့ဆန်းစစ်မှုပြဿနာလည်းမရှိ" ပေါ်လာ
ဒီ messege ... ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ??
နိုဝင်ဘာလ 20, 2018 မှာ 7: 40 ညနေ
သငျသညျသစ်တစ်ခုဟာ android device ကိုဝယ်လို့
အောက်တိုဘာလ 20, 2015 မှာ 8: 48 နံနက်
Awesome ကို app ကို ... alott thanx
အောက်တိုဘာလ 19, 2015 မှာ 7: 31 ညနေ
ဤသူသည်ငါသိကိုအကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ် ... ငါကကြိုက်နှစ်သက်ပါကဆက်ကြိုးစားပါ! ☺
အောက်တိုဘာလ 8, 2015 မှာ 11: 46 နံနက်
ဘာသာပြန်ချက်ဘို့ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခု ORC အဖြစ်အသုံးပြုမသာ။
ငါသည်ဤဟာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အများအပြား ORC applications များဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့် check လုပ်ထားပါပြီ။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်, ဒါပေမယ့်အလွန်တိကျမှန်ကန်။ အဆင်မပြေတဦးတည်းကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် WIFI ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ်ထင်ပါတယ်ရှိပါသည်။
SK Mehetab အလီ says:
စက်တင်ဘာလ 4, 2015 မှာ 10: 57 ညနေ
ငါ ...... လျှောက်လွှာအတွက်လည်းမရှိကိုအကောင်းဆုံးင်ထင်ပါတယ်။ !!!
Md ။ Rony says:
စက်တင်ဘာလ 4, 2015 မှာ 3: 03 နံနက်
ဤသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ app ကို ... admin ရဲ့ရှယ်ယာများအတွက်အများကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်စကားဒီ app ဖြစ်ပါတယ် ...
သြဂုတ်လ 11, 2015 မှာ 6: 34 ညနေ
လွယ်ကူသော, အသုံးဝင်သောနှင့်အကောင်းဆုံး site ကို။ thenks appsapk
ဇူလိုင်လ 2, 2015 မှာ 3: 00 နံနက်
အလွန်အံ့သြဖွယ် app ကို
ဇူလိုင်လ 2, 2015 မှာ 2: 16 နံနက်
ဇူလိုင်လ 2, 2015 မှာ 2: 14 နံနက်
Sufian ကို BP says:
ဇွန်လ 25, 2015 မှာ 3: 58 ညနေ
ဇွန်လ 23, 2015 မှာ 2: 42 ညနေ
မေလ 5, 2015 မှာ 10: 12 နံနက်
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှာအကောင်းဆုံး apk ဖြစ်ပါတယ်လည်းဤကဲ့သို့သောနှင့်က်ဘ်ဆိုက်၏ပိုင်ရှင်သူသည်နဲ့တူ
ဧပြီလ 19, 2015 မှာ 12: 02 နံနက်
ဟေးက ...... အစဉ်အဆက်လည်းဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ် app ကိုတကယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ app များအတွက် .Thanks ရဲ့ :)
မတ်လ 30, 2015 မှာ 7: 00 ညနေ
ဒီ website ငါဒါဟာ App ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည် Android အသုံးပြုသူများသည်အလွန်အသုံးဝင်သော Is
Nabi Hasan Kanpur တက် says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2015 မှာ 2: 53 ညနေ
သငျတို့သ AAP အခြားဘာသာစကားများ ko samjhne ငါ့ကို Meri bahut အကူအညီ krta hai
ek baar mujhse ဟိုဂါယာ Tha delete
sajid ထို့ကြောင့် Vicky says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2014 မှာ 10: 58 ညနေ
hy! ဆရာ ur appsapk.com အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်က, ငါ ... သင့်ရဲ့ကြင်နာမှုထိုသို့လွန်းကျေးဇူးတင်စကားကြိုက်တယ်။ ဒီ app ကို ... ကနဲ့တူ ... ကိုယ့်တဦးတည်းထိတွေ့မစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် & ဘာသာပြန်ဆို ... waooo
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2014 မှာ 1: 17 ညနေ
ဒီဟာအလွန်အသုံးဝင်သော App ဖြစ်ပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 27, 2014 မှာ 12: 18 ညနေ
ဤသည် apps အလွန် full.Thank သင်အသုံးပြုဖြစ်ပါသည်
နိုဝင်ဘာလ 18, 2014 မှာ 3: 02 ညနေ
ငါဒီ app ကိုချစ်ကြတယ်။ ၎င်း၏အလွန်အသုံးဝင်သော။
shivam sawant .. says:
နိုဝင်ဘာလ 17, 2014 မှာ 9: 52 နံနက်
Abdul ပွတ် says:
အောက်တိုဘာလ 1, 2014 မှာ 10: 04 ညနေ